Pakistana: Bilaogin’ny Tsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 19:02 GMT
Anatin'ity lahatsoratra ity, hamboraka aminareo ny paikady mahomby sy ny fitondrantenako rehefa maneho hevitra anaty bilaogy aho. Kanefa alohan'ny hahatongavako amin'izay, manome ny antsipirian'ilay raharaha fanivanana mibaribary nisy tao Pakistana farany teo i Glass House.
Mametraka ny hadisoana ho an'ny MQM i Teeth Maestro momba ilay fanivànana fahitalavitra.
Manoratra ny asa sorany farany momba ny toejavatra misy ao Afovoany Atsinanana (pejy voafafa) amin'ny fomba matihanina i Fountainhead.
Farany, te hanazava ny lahatsoratro vao haingana momba ny seho an-tsehatra Pakistaney iray voararan’ny governemanta aho. Aorian'ny amakianao ity lahatsoratra ity, ny hany fanehoankevitra mendrika tokony havoakanao dia, “Oao! Tena mahira-tsaina sy mahaliana tokoa ilay lahatsoratra hany ka te handefa vola be ho anao any amin'ny kaonty bankinao manokana aho.”